कौतूहलता सडकभरि पोखिन्छ.....
संघाई स्ट्रिटको त्यो घुम्ति-
मधुरो ल्याम्पपोष्टको आडमा उभिएका
'सी' ग्रेड मुवीको भद्धा पोष्टरजस्तै
ती राता बत्तीहरु ।
हरेक साँझ घर फर्कंदा
टक्क रोकिन्छन् पाईलाहरु
नजानिँदो कौतूहलता !
किन वैँशहरु यसरी सडकभरि
छताछुल्ल पोखिन्छन् ?
कच्याक्कुचुक्क परेका विछ्यौनामा
लमतन्न उत्तानो पल्टिदिनु र
भावनामा विनिमय हुनुको के अर्थ हुन्छ ?
मधुरो अनुहार लिएर
जतिसुकै मस्किन खोजे पनि
गालाभरि लाली सोहोरेर
मेला-बेंशी र दौंतरीहरुसँग
ठाँटिन उनीहरुलाई पनि
के मन नपरेको होला त ?
हरेक विहानी उम्रन्छ सपना
साँझ नपर्दै फक्रन्छ बैंश
छरपस्ट हुन्छ रातभर ॥
थाकेको आङ तन्काउँदै
एक निमेष होईन युगौंको
महोदय ! तर
उनीहरु मात्रै किन 'वेश्या' कहलिन्छन् ?
कौतूहलता सडकभरि पोखिन्छ …